Iziphethu Ezishisayo Ezihamba Phambili Nezimangalisayo Eziseduze Kwami e-United States
By UChrisking September 10, 2021 Izikhangibavakashi 0 Amazwana
- Iziphethu Ezishisayo Eduze Kwami -
Ngabe udinga ukuphumula? Khululeka emanzini acebile ngamaminerali kwelinye lamachibi wemvelo ase-United States, avela ku-Allegheny Springs eVirginia kuya eChena Hot Springs e-Alaska.
Kodwa-ke, senze uhlu lwezindawo ezinhle kakhulu zokuhlala. Ngakho-ke, lapha uzofunda ngemithombo eshisayo enkulu kunazo zonke e-United States, esukela emachibini ase-Alaska alungele ukubona amalambu asenyakatho aye epaki kazwelonke eqanjwe ngamanzi ayo ashubile.
Yiba ngangokunokwenzeka, qaphela. E-United States, kudala iziphethu zemvelo ezishisayo. Futhi, akukho lutho olufana nokugeza kulezi zindawo zokuphulukisa zezimangaliso zomhlaba.
Ngokufika kwenkathi ebanda kakhulu, sihlanganise uhlu lweziphethu eziyishumi ezinkulu kakhulu ezishisayo e-United States. Siqiniseke ukukhomba lapho ungapaka khona i-RV yakho ngenkathi uvakashele ngoba lezi yizindawo ezinhle ze-RV.
Noma kunjalo, qaphela. Ngokwemvelo, iziphethu ezishisayo zingaba yingozi impela, futhi uqaphele ukubhukuda ngokuphepha kuphela.
Iziphethu ezi-10 ezihamba phambili ezishisayo e-United States
1. I-Valley View Hot Springs, Colorado
I-Valley View Hot Springs icishe ibe yihora elisenyakatho ne- Ipaki Kazwelonke Yesihlabathi Esikhulu futhi ifaka iziphethu eziningi zemvelo eziphakelwe phakathi kobukhulu bemvelo.
Hamba ngamamitha angama-400 uphakamise umzila ukuze uzithole uwedwa phakathi kwezihlahla echibini elijule ngamamitha amane, noma ubhukude ungene echibini elifudunyezwe ngokwemvelo eduze namakhotishi.
Futhi, amazinga okushisa emachibini ahlukene avela ku-93 kuye ku-107 degrees Fahrenheit ngokuya ngesikhathi sonyaka. Futhi bane-sauna enikwe amandla ugesi ophehlwa ngamanzi.
Ngamachibi ahlukene ayisishiyagalombili ongakhetha kuwo, uzothola indawo ekahle ongathatha kuyo ubuhle bendawo.
Ngokwengeziwe, zonke izizathu ziyizingubo zokuzikhethela, futhi amatende e-RV nokuqashwa kwamakhabethe angasese ayatholakala.
2.Burgdorf Hot Springs, Idaho
IBurgdorf Hot Springs iyona engcono kunazo zonke iziphethu ezishisayo e-Idaho. Inamachibi amabili ashisayo anezinga lokushisa elijwayelekile elingu-113 degrees Fahrenheit (45 degrees Celsius) kanye nedamu elincane izingane ezingangena kulo.
Futhi, leli sayithi lifaka amakotishi akudala lapho ungahlala khona, kepha kufanele uhlinzeke owakho umbhede. Indawo yokungcebeleka itholakala ngomgwaqo phakathi nezinyanga zasentwasahlobo nasehlobo, kepha itholakala kuphela nge-snowmobile unyaka wonke.
Kuvulwe izinsuku ezingama-365 ngonyaka, ngakho-ke ungageza lapha nangosuku lukaKhisimusi.
3. Iziphethu Ezishisayo Arkansas
Iziphethu Ezishisayo Ipaki Kazwelonke itholakala enyakatho yeHot Springs, e-Arkansas, eGarland County, futhi iqukethe iziphethu ezishisayo zemvelo ezingama-47.
Kudala ngaphambi kokufika kwabaseYurophu, izizwe eziseduze zamaMelika Omdabu zazihlonipha izimfanelo zokuphulukisa zamanzi, kwathi ngasekupheleni kwekhulu le-18, iHot Springs yase isiphenduke indawo ethandwayo yamaholide.
Qala ukuvakasha kwakho esikhungweni sezivakashi, esibekwe kumlando weFordyce Bathhouse, bese uqhubekela eBathhouse Row, okuyikhaya lezindlu zokugeza eziyisikhombisa ezengeziwe ezinomlando.
Vele, uzofuna ukugeza okuvamile kumaBuckstaff Baths, aphefumulelwe ngamabhati aseYurophu ekhulu le-18.
4. IHot Springs State Park, eWyoming
Iziphethu Ezishisayo I-State Park inikeza indlu yokugezela yamahhala esendaweni enhle kakhulu emahoreni ambalwa ukusuka eYellowstone National Park eduze noMfula iBig Horn. Akungcono kangako kunokubona inyathi izulazula ezindaweni zokugeza ezishisayo ezingama-104-degree.
Amachibi okubhukuda angaphakathi nangaphandle ahle kakhulu ngemuva kokuhambahamba epaki. Izindawo zemvelo zeRainbow Terrified zigeleza njalo emahoreni angama-24 ngaphezu kwamalitha angu-8,000 wamanzi.
5. IChena Hot Springs, eFairbanks, e-Alaska
Cwilisa ezindaweni ezimanzi futhi ezibalele nxazonke, kodwa ungabona amalambu asenyakatho noma i-aurora borales idansa esibhakabhakeni ngenkathi ubhukuda kokugqamile.
Kusukela ngoSepthemba kuya kuMashi yizikhathi ezinkulu kakhulu zokubona ukukhanya kwasenyakatho.
6. ECalistoga, eCalifornia
ICalistoga, eNapa Valley, yaziwa kahle ngemithombo yayo eminingi eshisayo. Izindawo eziningi zokungcebeleka esifundeni zifaka amachibi amaminerali lapho izivakashi zingakhululeka khona futhi zijabulele amanzi.
Isibonelo, iCalistoga Spa Hot Springs inamachibi amane amaminerali e-geothermal, kufaka phakathi i-whirlpool eshisayo nedamu elifudumele.
I-Solage, iqoqo le-Auberge Resorts, likhaya le-spa elikhulu elinendawo yokugezela equkethe amachibi okushisa okushisa ahlukahlukene izivakashi ezifuna ukuhlala okunethezeka ngesikhathi sokuvakasha kwazo ezweni lewayini.
7. IGlenwood Hot Springs, eColorado
IGlenwood Hot Springs, ethi inechibi leziphethu ezishisayo kunawo wonke emhlabeni, iyindawo yokunethezeka enechibi elikhulu, ama-slide wamanzi, indawo yokudlala igalofu elincane, kanye ne-spa yokunethezeka enokubukwa okuhle kwe-Rocky Mountains.
Futhi, imithombo ekuqaleni yaqanjwa ngokuthi “Yampah” ngabakwa-Utes, okusho ukuthi “umuthi omkhulu” maqondana namandla okuphulukisa amanzi amaminerali.
Amanzi afaka amaminerali ahlukene ayi-15 okuthi uma ehlanganisiwe anikeze izinzuzo eziningana zezempilo ngaphezu kokunciphisa izinhlungu nezinhlungu.
8. ITravertine Hot Springs, eBridgeport, eCalifornia
Buka amaSierras ngesikhathi seholide lakho e- I-Travertine Hot Springs yemvelo ezungeze iBridgeport, eCalifornia. Lawa madamu amancanyana, angama-rustic ayikhefu elihle ngemuva kosuku lokuhamba eCalifornia State Parks, ku-Route 395.
9.I-Alleghany Springs, eVirginia
Izintaba zaseVirginia i-Allegheny zingezinhlobonhlobo ezisukela empumalanga ye-United States ziye eCanada. Kungatholakala imithombo yokushisa engaphezu kwekhulu ngaphakathi kombuso, eminye ithenda kancane, kanti eminye ingaphezu kuka-100F. (100C).
Futhi, amandla okwelapha avela kuma-1600s lapho owomdabu waseMelika ewathola. Manje kunamachibi okubhukuda amabili adumile, iWarm Springs neJefferson Pools, asetshenziswa nguThomas Jefferson.
10.Isihlanu Samanzi Ashisayo e-Diamond Fork Canyon, e-Utah
Lezi ziphethu zemvelo ezishisayo, cishe ukuhamba ngehora ukusuka eSalt Lake City, mhlawumbe kungaba yinselelo enkulu ukuthola ngoba cishe amamayela ayi-2.5 ukusuka enqoleni yomgwaqo enokukhuphuka kwamamitha angu-700.
Le ndawo, eyaziwa nangokuthi i- IDayimane Fork I-Hot Springs, inempophoma namachibi amaningi okugeza abonakala sengathi aphuma enganekwaneni, anamanzi amahle oluluhlaza.
Banephunga elicishe libe yisibabule, kodwa ukugeza kula machibi kuyindlela ekahle yokunqamula uhambo oluya kubo. Ngoba leli yisayithi elidumile, zama ukuvakashela phakathi nesonto noma ekuseni ukuze ugweme izixuku.
Kodwa-ke, amanani akhululekile ukusebenzisa futhi futhi, ikamu le-RV liyatholakala eduze kwenkambu yeDiamond.
11. I-Faywood Hot Springs Resort
Ukugeza emanzini ashisayo wemvelo ashisayo phakathi nogwadule kuyinto ehlukile e-rustic I-Faywood IHot Springs Resort eNew Mexico. Indawo yokungcebeleka inamachibi amaningi angaphandle ahlinzekwa yiziphethu zemvelo zemvelo.
Kunamachibi azimele atholakala ezinhlobonhlobo zamazinga okushisa, kanye nethuba lokuzika ngokuncanyana emachibini "wokuzikhethela okokugqoka", adumile kososayensi bemvelo.
Futhi, kukhona futhi namabhavu ashisayo asendlini, kanye namakotishi okuzenzela ukudla, kanye nekamu lapho ungapaka khona i-RV yakho noma ubeke itende lakho ebusuku.
12. IDunton Hot Springs, iDolores, eColorado
Endaweni ebabazekayo, UDunton I-Hot Springs, indawo yedolobha eyisipoki eyaqala ngawo-1800, inikela ngamachibi amaningi asentwasahlobo ashisayo.
Cwilisa endlini yokugezela, echibini elingaphandle, noma uqashe i-Well House ngolwazi lwakho siqu emithonjeni eshisayo.
IDunton Hot Springs yindawo encane futhi ekhethekile etholakala ekujuleni kwezintaba zaseSan Juan, ivuselelwe ngokuphelele futhi idolobha le-ghast lihlala kokungafani.
Izindlu zamapulangwe ezenziwe ngezandla ezihlotshiswe ngokunambitheka okukhulu, indawo yokuphumula ephakela ikhishi eliphakeme. Futhi, lo mzana wasendulo wezimayini obukekayo usanikeza i-Wi-Fi esheshayo kuwo wonke amakhabethe
13. IGlen Ivy Hot Springs
Kusukela ku-1860, the UGlen Ivy Iziphethu Ezishisayo Ezintabeni ZaseSanta Ana zidonse izinkulungwane zezivakashi ezazi impilo ukuze zijabulele esinye sezipho ezinhle kakhulu zemvelo: iziphethu zamaminerali ezishisayo ezenzeka ngokwemvelo.
Uma uvakashela i-Glen Ivy namuhla, uzongena kwesinye sezikhungo zezempilo zaseMelika ezinkulu kunazo zonke, ezinamachibi ashisayo ayi-19 nohlu olubanzi lwezokwelapha nemisebenzi ye-spa.
Ungashisa futhi ujuluke kwelinye lama-sauna amasha ngaphambi kokuzama ukuhlanza ukwelashwa ngodaka obomvu, ukubhucungwa okuphumuzayo, noma ubuso obuzolisayo.
Futhi, indawo yokuvakasha itholakala esifundeni esikhulu esihle futhi inikezela ngokudla okuhle kakhulu okunomsoco ukuncoma isipiliyoni sakho esishisayo sentwasahlobo.
14. ICastle Hot Springs, e-Arizona
Le ndawo ehehayo iyindawo ekahle yalabo abafuna i- Ukunethezeka isipiliyoni seziphethu ezishisayo.
Amachibi avaliwe afakwe endaweni emangalisa yasogwadule ahlinzeka ngesipiliyoni sohlobo olulodwa, futhi ukuhlala okubandakanya konke kufaka ukudla, ukufinyelela emithonjeni, nemisebenzi efana nokuhamba okuqondiswayo nokuvakashelwa emapulazini.
15. IBoquillas Hot Springs, iBig Bend National Park, eTexas
A kude intwasahlobo eshisayo e-United States kunzima ukuyithola. Imithombo itholakala ngaphesheya nje koMfula iRio Grande eBig-Bend National Park eNtshonalanga Texas, enemibono emihle ngeMexico komunye umfula.
Cishe kunguhambo lwamahora amabili ukungena eNational Park ngaphambi kokuthi ufike emgwaqeni omncane owubhuqu oqonde ekhondweni lomkhondo. Kuyibanga elifushane elihamba amamayela ukusuka endaweni yokupaka kuya emithonjeni.
Ukushisa okushisa kwe-geothermal kwamanzi entwasahlobo kungama-degree angama-105 unyaka wonke. Hop emfuleni iRio Grande ukuze uphole phansi ekushiseni kweziphethu!
Amanani akhokhiswa ukusetshenziswa uma kukhokhiswa imali engu- $ 50 ngemoto ngayinye.
16. IMontezuma Hot Springs
Izivakashi eziya eLas Vegas zingase zisuke e-glitz nobukhazikhazi amahora ambalwa ngokushayela amamayela ayi-6 ukuya enyakatho-ntshonalanga kuye Montezuma IHot Springs, ebisaziwa amakhulu eminyaka ngemithi yabo yokwelapha ecebile ngamaminerali.
Baye bamisa amanzi ashisayo futhi abilayo ngokwemvelo ochungechungeni lwamachibi kasimende osayizi namazinga okushisa ahlukahlukene, aseduze koMfula omuhle waseGallinas, eduze kwezakhiwo eziningi zasendulo ongazithokozela ngemuva kokugeza emachibini.
ILobster Pot ne-Africa Pool ngamachibi amabili emadwale emvelo ashubile angaba nesibindi. Ukungena kulezi ziphethu ezishisayo kumahhala ngoba kutholakala futhi kuphethwe ezweni elizimele eliphethwe yi-United World College.
17. IMono Hot Springs, eCalifornia
Itholakala enyakatho yeCalifornia, iMono Hot Indawo yokuhlala izivakashi iseduze neSierra Nevada. Izintaba zathambisa le ndawo ethule, 70mi (113km) eningizimu-ntshonalanga yehabbub yaseFresno.
Ziphathe kahle kwesinye seziphethu ezishisayo eziyishumi nambili eduze noMfula iSan Joaquin. I-Old Pedro ishisa bha ku-107F (42C) kanti amachibi okubhukuda oMhlanga ayabanda kancane, okwenza ukuthi kuphuzwe isikhathi eside. Ngemuva kwalokho yima endaweni yokudlela entsha edotshwa emfuleni.
18. I-Iron Mountain Hot Springs
Iron Mountain IHot Springs iyindawo entsha yeziphethu yamaminerali kanye nezokuvakasha eduze kwaseGlenwood Springs, eyavulelwa umphakathi ngo-2015. Yasungulwa yizithandani uJeanne noSteve Beckley noCoop noMogli Cooper ngonyaka ka-2015.
Lesi sikhungo sinezindawo zamachibi nezindawo zokuthokomala ezithokomisayo nezithokozisayo ezinamanzi acebile ngamaminerali angaphezu kwe-14, kufaka phakathi i-sulfate ne-iron, ezaziwa ngemiphumela yazo yokwehlisa nokwelapha.
Idamu elikhulu lomndeni liphethe amalitha amanzi ayi-100,000, nezindlela ezifudumele Xhuma amachibi amancane ayi-16. Kukhona nendawo yokugezela esesizeni, kanye neSopris Cafe, ehlinzeka ngamasemishi wokugoqa kanye nama-pizza wesinkwa esisicaba.
19. Imithombo Yamaminerali Afudumele
I-Warm Mineral Springs, enamahemuhemu okuthi yiwo uMthombo Wentsha ofunwa yiPonce de Lyon ngawo-1500s, iyichibi lokushisa lemvelo elaziwa kancane eduze kwaseNyakatho Port, eFlorida.
Imithombo inomlando othakazelisayo, futhi abavubukuli bathole ubufakazi bokuthi ichibi lalaziwa yimiphakathi yasendulo, ababeyihlonipha njengendawo engcwele futhi bangcwaba abafileyo babo eceleni kwamachibi echibi.
Izivakashi manje zingachitha amahora ambalwa zifaka izimfanelo ezinikeza impilo zamanzi angama-85-degree endaweni enhle efana nepaki ngenkathi zisebenzisa izinketho zezinsizakalo ze-spa ezibhukelwe ngaphambilini.
20. IGoldstrike Canyon Hot Springs, iLake Mead National Recreation Area, eNevada
Cishe ihora elilodwa ukusuka eLas Vegas, ukuthula kwe IGoldstrike Canyon inikeza umehluko oqinile wokuthula nokuzola.
Uzothola i-oasis yamachibi anezimpophoma ezigobhoza ngemuva kohambo oludinayo lwamamayela amabili, ngokunwaya kancane amatshe nokusizwa ezintanjeni ezibekwe ngobuhlakani.
Amanzi ayahluka phakathi kuka-70 ° C no-144 ° C futhi kukhona ngisho namachibi ajulile ngokwanele ukuthi ungabhukuda. Uzoshaya uMfula iColorado ngemuva kokuhamba eminye imizuzu engama-30 usuka emithonjeni eshisayo.
Iseluleko se-Pro: gwema lokhu kukhuphuka kokushisa okuphezulu ngoba sekushone abaningi ukufa kwe-heatstroke.
21. Imithombo Yesihlanu Eshisayo Yamanzi, iDayimane Fork Canyon, e-Utah
Lezi ziziba zokugeza zemvelo, ezaziwa nangokuthi i- IDayimane Fork IHot Springs, icishe ibe ngamakhilomitha ayi-2.5 (amakhilomitha amane) ukusuka enqoleni enkulu yomkhondo futhi iqukethe amachibi amaningi acwilayo nempophoma ebabazekayo.
Futhi, iziphethu ezishisayo zivela njengokuthile okuphuma encwadini yezindaba, namanzi azo amahle aluhlaza okwesibhakabhaka, kanti ngenkathi enephunga elincane le-sulphurous (eggy), zilungele ukugeza lapho kuphethwa uhambo.
Ngokuvamile ungahamba indlela ngaphandle kwezicathulo zeqhwa ebusika, kepha uzodinga imoto edonsa ngamasondo amane ukuze ufike ekhondweni lomzila.
22. I-Strawberry Park Hot Springs, iStamboat Springs, eColorado
Emithonjeni, akukho okufana nokucwilisa ukwehlisa usizi lwakho kulandela usuku olunzima kuma-pistes. Esigodini sasemaphandleni, amanzi amaminerali ayi-104 ° amazinga okushisa afanele ukungena eqhweni elizungezile, okuhle kuzivakashi zasebusika.
NoteIpaki ligcinelwe abantu abadala ngemuva kokugqoka okumnyama nokuzikhethela. IStrawberry Park futhi ihlinzeka ngendlwana egqwalile yabantu abafuna ulwazi oluyingqayizivele lwamatende, izimoto ezivalekile, kanye nezitimela zesitimela.
Izindleko zokungena ziyi- $ 20 nsuku zonke. Indawo yokukhempa yeRV eSteamboat Springs iyavalwa.
23. I-Deep Creek Hot Springs
I-Deep Creek IHot Springs iseHlathini Likazwelonke LaseSan Bernardino eduzane nedolobhana lase-Apple Valley, ezansi nomfantu ojulile.
Futhi, iziphethu zifinyeleleka ngomzila omfushane wokuhamba ngezinyawo u-2.5-mile ukusuka eBowen Ranch, ocwilisa ngokweqile uye e-Deep Creek - zilungiselele ukukhuphuka okunzima ubuyele esihlokweni somzila.
Ngemuva kokuwela i-Deep Creek, kunamachibi ashisayo ahlukene cishe amahlanu noma ayisithupha ongawasampula - izinga lokushisa lamanzi liyahlukahluka kusuka echibini liye echibini futhi lingahluka ukusuka kokufudumele kuya kokushisa kakhulu.
Uma udinga ukuphola, ungagxumela emanzini abandayo omfula. Letha amanzi amaningi kanye nesivimbo selanga.
24. IGila Lezwe Lesizwe
Lapho uvakashela isikhumbuzo sikazwelonke esithandekayo se UGila Cliff ngaseSilver, eNew Mexico, kufanelekile ukuhamba ukubuka ezinye zokugeza ezishisayo zemvelo. Ukuhamba imizuzu engu-20 ngomzila ongu-157 kuqala esikhungweni sezivakashi saseGila bese kukuletha kuLight Feather Hot Springs.
Uzothola amanzi athela kusuka phansi emhosheni omkhulu, okucishe kube yi-130 degree degree.
Uma ufuna ukuhamba ibanga elide, ungafinyelela e-Jordan Hot Springs enabantu abaningi cishe ngama-degree angama-90 echibini lokubhukuda elinamamitha amathathu ubude elinamanzi acebile amaminerali.
Idaho yaziwa ngezindawo zayo eziningi ezivulekile nobuhle bemvelo obuhlanzekile. I-Kirkham IHot Springs ibhekwa njengenye yeziphethu ezishisayo ezingakaze zonakaliswe e-United States, ezinamachibi asogwini lwePonderosa Pine Scenic Byway, eSouth Fork yoMfula iPayette.
Amanzi ashisayo ehlela eweni, lapho ungahle ube khona neshawa enhle ngaphansi kwempophoma. Ngisho nasezinsukwini ezimatasa, ungathola indawo enokuthula yokubonga indawo enhle ngenxa yamachibi ahlukene ayi-10.
Imithombo eshisayo imahhala, kepha ukupaka kungama- $ 5, futhi inikeze amatende e-RV eKirkham Campground ngama- $ 15 ubusuku ngabunye ngaphandle kwama-hookups.
I-Bathhouse Quapaw nakanjani kungokuhlangenwe nakho okuhlukile emhlabeni weziphethu ezishisayo ezisenkabeni yedolobha iHot Springs, e-Arkansas. Amanzi ayeneminyaka engaphezu kwengu-4,000 XNUMX ubudala enekhabhoni futhi amagama amaningi emizi aqanjwa ngamanzi okwelapha afaka uBabe Ruth no-Al Capone.
Izinhlobo eziningi zokwelashwa kwe-spa, izindawo zokugeza ezizimele, namachibi okushisa weqembu ayatholakala naseQuapaw Bathhouse. Phumula kwelinye lamachibi amaminerali afudumele egumbini elizimele, noma uthathe izindlu zangasese ezimbalwa ngaphansi kophahla lwengilazi oluhle kakhulu.
Izintengo zansuku zonke ziyahlukahluka futhi ziqala ku- $ 20 umuntu ngamunye futhi amakamu e-RV asebenza ngo- $ 30 ubusuku bonke ngokuxhumeka okugcwele endaweni eseduze neHot Springs National Park eGulpha Gorge
27. Indawo yaseTecopa Hot Springs Resort
AbakwaTecopa IHot Springs Resort, etholakala empumalanga yeDeath Valley National Park futhi ebangeni elingamakhilomitha angaba ngu-80 ukusuka eLas Vegas, eNevada, inikeza ithuba elingabizi lokujabulela amanzi okwelapha amaminerali eTecopa Hot Springs.
Indawo yokuvakasha inikezela ngezindawo zokuhlala zasebusuku ezahlukahlukene, kufaka phakathi amakamelo, amagumbi okulala, kanye nezindawo zokukhempa, konke okubandakanya ukusetshenziswa kwamahhala kwemithombo eshisayo enamaminerali.
Kunemibhobho emihlanu yokucwilisa yangasese efinyeleleka kubantu abafika kuqala, abasizakala kuqala; indawo yokuphumula idonsa amanzi ashisayo emvelo kulawa mabhavu, abekwe endlini yokugezela noma ehhotela, ngakho-ke ungajabulela imiphumela yawo yokuphulukisa ngasese.
28. Iqiniso noma Imiphumela, New Mexico
Iqiniso noma Umphumela amanzi ahlanzekile futhi acacile, ngamazinga okushisa asukela kuma-degree angama-98 kuye kwayi-115 kanye nenqwaba yamaminerali alusizo endaweni engathathi hlangothi ye-pH.
Yize ungomunye wamanzi anamaminerali amaningi e-United States, amanzi amaminerali lapha awanaphunga.
Idolobha lonke lakhiwa ngomqondo wesimiso sezempilo esiqinile sezinsuku ezingama-21 sokucwila ukuze uthole ukwelashwa - konke, mhlawumbe, hhayi, kepha uzozizwa ungcono ngemuva kokuthatha amanzi, uphumule, futhi uthambise ukubhucungwa. , kanye nezikhathi ze-reiki.
I-Pelican Spa, ebekiwe phakathi kwamakamelo okugeza, iyona ndlela ongayikhetha ngokuthola indawo yokuhlala efanayo.
Kufanele uthole ukucwila ku Umpqua Iziphethu Ezishisayo. Kungafinyelela kubo ngohambo olufushane olungamamayela ama-3 ku-North Umpqua Trail, ewela uMfula iNyakatho Umpqua kathathu.
Umzila uhlukaniswe njengolinganiselayo ngenxa yamagquma athile aphakeme nezindawo eziqinile. Ngaphezu kwalokho, i-trailhead ephakeme ngezinye izikhathi iyavalwa phakathi nezinyanga zasebusika, okuholela ekuhambeni okude ukufinyelela lapho.
Futhi, i-Umpqua Hot Springs iqoqo lamachibi amancane, elinye lawo livikelwe yisakhiwo esakhiwe ngokhuni.
Yaziswa ukuthi izingubo azidingeki kulezi ziziba, eziya ngokuya zithandwa ngabantu abahamba izintaba abafuna ukuphumula ngemuva kokubona izingosi zendawo ezifana I-Toketee Falls.
30. Chico Hot Springs, Thandaza, Montana
Chico IHot Springs ivulwe cishe ikhulu leminyaka futhi ithandwa kakhulu ezivakashi eziya eYellowstone National Park. Indawo yokungcebeleka, etholakala ezansi ne-Emigrant Peak, inikela ngezinhlobonhlobo zezinketho zamahhotela, kufaka phakathi indawo yokuhlala yezihambi iVictoria, amakotishi, kanye ne-glamping.
Ungasebenzisa amachibi entwasahlobo ashisayo angaphandle mahhala uma uhlala endaweni. Futhi ungathenga ukudlula kosuku okuzoza kosuku - qiniseka ukubuza ngesaphulelo esiphezulu.
Bhuka ukwelashwa kwe-spa bese uqeda usuku ngechibi lesidlo sakusihlwa noma ngaphakathi kwebha endala ngaphambi kokubuyela ukugeza ngaphansi kwesibhakabhaka saseMontana.
31. Eureka Springs, e-Arkansas
Ukubuyela emuva emuva emuva enkathini yama-Victorian ukujabulela amanzi ngobuhle e Indawo yokubungaza i-Eureka Springs emzaneni.
Imigwaqo eshaywayo ayinazo izimpawu zomgwaqo, futhi izindlu ezincane zamatshe nezindlu ezinkulu zizokuthokozisa amabhulukwe, zikulungiselele ngempumelelo ukuthi ugxumele ezindlini zokugeza noma eBlue Spring Heritage Centre, lapho kutholakala khona konke ukushisa.
Leli dolobhana elihle, elibizwa nge- “Little Switzerland yaseMelika,” lizokunikeza amathuba amaningi okuphumula nokujabulela umoya omsulwa we-Ozark.
Hlala enhliziyweni yesenzo ehhotela laseBasin Park, elibekwe ekhoneni lomunye wemigwaqo edume kakhulu yedolobha.
32. Tuscan Springs Ihhotela ne-Spa
Itholakala Ugwadule Hot Springs, North of Palm Springs, ITuscan Springs Ihhotela ne-Spa inikeza izivakashi ithuba lokuphumula, uphumule futhi uphuze ku-spa yemvelo.
Futhi, abahlali basehhotela bangachitha ihora noma amabili kokukodwa kwama-hot spas amabili anikezwa ngamadigri ayi-117 wamanzi ashisayo wentaba-mlilo noma bakhethe ukumunca amaminerali echibini elikhulu elifudumalayo elihlala endaweni eshisayo ephelele.
Ungakhetha isipiliyoni sakho sentwasahlobo esishisayo ezinhlobonhlobo ezinkulu zokwelashwa. Indawo yokungcebeleka ibuye inikeze nohambo losuku, futhi njengoba udlula umenywa ukuthi uze uzothokozela amagagasi.
Imishini Esetshenzisiwe Eduze Kwami
33. ISpring Resort neSpa California
Kutholakala eDesert Hot Springs, eSpring Resort naseDay Spa kunikeza izivakashi indawo enokuthula lapho ungaba nesipiliyoni esidumile seCalifornia Thermal Spring.
Uma uvakashela indawo enokuthula, lapho kungatholwa khona amalokishi azungeze amachibi amathathu asentwasahlobo, isiphuzo samanzi abandayo sizokwamukela.
Futhi, amanzi entwasahlobo aphakathi kwamanzi afudumele endaweni, yingakho anikela ngamazinga amakhulu wamaminerali okwelapha agcwele izinzuzo zezempilo. Ungakujabulela konke ukuphila kwakho kahle bese ungeza ukusikhipha noma okunye ukwelashwa okunempilo ekuvakasheni kwakho.
34. ISaratoga Springs, eNew York
Ulayini wephutha useduze Saratoga Springs, inhlokodolobha yomjaho wamahhashi emhlabeni, ivumela umthamo omkhulu wamanzi wezokwelapha ocebile ngamaminerali agelezele phezulu. Ngenkathi imithombo inephunga elinesibabule, ingaphezu kokubekezelela.
Ukwengeza, ukunambitheka kwamanzi, ngakolunye uhlangothi, kuyehlukahluka kusuka emanzini angenawo usawoti kuye kokuncane okunosawoti noma i-sodium bicarbonate. Letha ibhodlela lamanzi ozolihambisa ekhaya njengesikhumbuzo ukuze umndeni wakho nabangane bazuze ezinzuzweni zokwelashwa.
Vakashela i-Gideon Putnam Resort ne-Spa, esebenzisa amanzi eSaratoga Springs ekwelashweni kwabo okuhle kwe-spa, noma umane ususe ama-aches nezinhlungu zakho kubhavu wabo wangasese.
35. I-El Morocco Inn ne-Spa California
Uyemukelwa ku-kasbah! Ungaphumula emanzini afudumele asemoyeni azungezwe izindawo zokunethezeka ezinetimu yaseMorocco I-El Morocco Inn & Spa ehlane Iziphethu Ezishisayo.
Ngokwengeziwe, ukumanzisa izinkathazo zakho emanzini ashisayo emvelo, acebile ngamaminerali e-whirlpool bath kanye nephuli, ungabhuka ukusikwa nokwelashwa okuhlukahlukene kwendabuko, ngokugxila kuzo zonke izinto zaseMoroccan.
Futhi, amakamelo aklanywe kahle ale ndlu yokulala bonke babhekene nechibi elishisayo, futhi uzungezwe izindwangu ezicebile ezinemibala eyigugu nempahla engenisiwe yaseMorocah ukuze wakhe indawo enhle yokuhlangenwe nakho kwentwasahlobo eshisayo yaseshashalazini.
36. I-Miracle Springs Resort ne-Spa California
Indawo Yokuvakasha Yesimangaliso kanye ne-Spa, etholakala imizuzu embalwa nje kusuka edumile iJoshua Tree National Park emagqumeni eDesert Hot Springs, ithembisa izivakashi isipiliyoni sokuthoba nokuvuselela esishisayo sentwasahlobo.
Indawo enkulu yokuzilibazisa enentambo yesundu enamachibi ayisishiyagalombili isethwe kahle ngemuva kweNtaba iJacinto embozwe yiqhwa. Amanzi amaminerali ashisayo agobhoza esuka emanzini alele ngamamitha angama-300 ngezansi ahlinzeka ngamachibi.
Futhi, izinga lokushisa kwamanzi emthonjeni lingama-degree angama-140, futhi amachibi acishe abe ngama-degree angama-90 – alungele ukucwilisa nokubhukuda. Ukuhlinzekwa esizeni, ukudla, kanye nohla oluphelele lokwelashwa kwe-spa.
37. Izintende Ezimbili Zesigaxa
Ngaphezulu kweminyaka ye-70, Ama-Palm Bunch amabili bezijabulisa izivakashi - IThe Springs ngawo-1940. Namuhla, lapho zivakashele elinye lamakamelo amahle ale Desert Hot Springs, izivakashi zingabheka phambili ekwelashweni okunokuthula.
Amanzi e-aquifer eMiracle Hill ahlinzeka ngemvelo yamaminerali eshisayo enokuthula nenika impilo futhi afinyelela izinga lokushisa lamanzi elicishe libe ngama-99 degrees lapho efika echibini laseTwo Bunch Palm Resort.
Ungakhetha ezinkethweni ezahlukahlukene zokwelashwa, kufaka phakathi amadokodo angaphandle, uphumule emfuleni i-rock alcove futhi ujabulele imvula engaphandle epholile.
Amanzi acebile amaminerali agobhoza ngaphansi komhlaba kulo lonke elase-United States, ehluma ukuhlinzeka ngendlela yemvelo yokuphumula futhi mhlawumbe aphulukise nezifo ezithile.
Ngokwengeziwe, ungakhetha ukugeza okulingene enkabeni yehlathi noma indawo yokunethezeka ebandakanya konke-isipiliyoni ngasinye semithombo eshisayo sihlukile njengamanzi ageleza ngaso.
Futhi, ukuba khona kolayini oqhubekayo wezintaba-mlilo ezisebenzayo, ezingasebenzi, noma ezingasekho ogwini olusentshonalanga ye-United States kusingatha inani elikhulu kakhulu leziphethu zemvelo ezishisayo.
Ngaphezu kwalokho, uketshezi olushisa phansi, oluconsayo, noma olugeleza luqhamuke ngaphansi kobuso bomhlaba kuyo yonke le ndlela yokuqhuma kwentaba-mlilo lunothe ngamaminerali abhekwa njengezici ezinikeza impilo futhi adonse abantu abanezifo ezahlukahlukene amakhulu eminyaka.
Sicela ushiye amazwana, njengale ndatshana ku-Hot Springs Eduze Kwami, bese utshela abangane bakho nomndeni wakho ngakho!
Tags:iziphethu ezishisayo kakhulu emhlabeni, iziphethu ezihamba phambili zemvelo ezishisayo e-usa, iziphethu ezishisayo, iziphethu ezishisayo emamephu ase-usa, iziphethu ezishisayo ungabhukuda eduze kwami, i-New York
Ingabe i-Delta Skymiles Iyaphelelwa? Isixazululo Namaqiniso Kwembulwa
Izindawo zokudlela ezihamba phambili ze-Ski emhlabeni kanye nezindawo ezimangalisayo neziwubukhazikhazi be-Ski
Izindawo Zokudla Okusheshayo Zivula Eduze Kwami kanye Nezindawo zokudlela ezihamba phambili ezingu-25 zokudla okusheshayo eMelika
I-Cat Clinic Eduze Kwami kanye Nezibhedlela Ezingcono Kakhulu Zezilwane e-United States
Umtholampilo Wamazinyo Wamahhala Eduze Kwami Ngezindatshana, Ukuhlolwa, Nokuhlanza
Ukubuyekezwa Kwezibuko Ezinhle Kakhulu zaseMelika, Izici, Izintengo, Izithombe, Ubuhle Nebubi
Ungathuthela Kanjani ECanada Futhi Ube Isakhamuzi SaseCanada Ngaphandle Kokucindezeleka